Iyo Art uye Sayenzi Yezviri Kushambadzira | Martech Zone
Iyo Art uye Sayenzi Yezviri Kushambadzira
Muvhuro, June 23, 2014 Svondo, June 22, 2014 Douglas Karr
Nepo zvizhinji zvezvatinonyora kumakambani zvidimbu zvehutungamiriri zvinofungidzirwa, kupindura mibvunzo inowanzo bvunzwa, uye nyaya dzevatengi - imwe mhando yezvinyorwa inomira kunze. Kunyangwe iri blog posvo, infographic, chena pepa kana kunyange vhidhiyo, zvirinani zvirikuita zvemukati zvinotaurira nyaya inotsanangurwa kana kuratidzwa mushe, uye inotsigirwa neruzivo. Iyi infographic kubva Kapost inonyatso dhonza izvo zvinoita zvakanaka uye iwo muenzaniso wakanaka we… mubatanidzwa we hunyanzvi nesainzi.
Nyika mbiri dze sainzi nehunyanzvi anowanzoonekwa seakasiyana. Asi vatengesi vezvakanakisa vanosanganisira zvese mune imwechete yekushandisa zvirimo. Ivo vanowedzera zvidzidzo kubva kudhata kuti vagadzire zvemukati zvinoshandura, nepo vachisundidzira kupfuura chinzvimbo quo nemafomati matsva uye makwara. Izvi infographic inoongorora simba rezvinyorwa zvinosanganisira kuruboshwe uye kurudyi kwehuropi, hunyanzvi uye kuongorora.
Maitiro edu ekugadzira zvemukati zvevatengi vedu zvinotevera maitiro aya nemazvo. Isu tinoita tsvagiridzo uye dhizaini zvakafanana, tobva taura nyaya panharaunda dzenzira dzevaviri. Kutsvagisa kukuru kunopa chikafu chinobatsira munhu kuvimba neruzivo rwavanowana uye nyaya hombe inovabatsira kuti vabatikane pamweya nezviri mukati. Izvi zvinonakidza!
Tags: Analyticsongorora mashandirokuongororaunyanzvihunyanzvi nesainzimishandirapamwekutauriranadata mapataniManzwiroruzivomashokokunzwainfographicutsanzikapostmutungamiri wechizvarwamailkutangamhandoTsikamupirokuenderana kwekutengesaKugonesa KugonesasainziStorytellingnzirasimbazviratidzoyokuedzwanguvamidziyozvinoonekwa
Maitiro Ekushambadzira Kwemagariro Evanhu Anokwira Kumusoro Nekushambadzira Kwechinyakare
Iwe Unopembedza Sei Vhidhiyo Yekutengesa Sarudzo?